Fail MLM Unicity ~ Myanmar Anti Mlm Group
Fail MLM Unicity
စာရှည်သွားလို့ Comment မရတာနဲ့
@Myat Moh Moh Pyone sis , ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်မှန်တယ်ထင်လို့ အများနဲံ့တစ်ယောက် ယှဉ်ပြိုင်ရဲတာတော့လေးစားပါတယ်
တချို့တွေကိုတော့ ဘဝင်မကျတာဖြစ်လိမ့်မယ် Anti တိုင်းကလဲ လူကောင်းကြီးပဲတော့မဟုတ်တာသေချာတယ်လေ
MLM အကုန်လုံးလဲလူဆိုးမဟုတ်တာလက်ခံတယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက Mindset နဲံ Multilevel marketing လုံးဝမကိုက်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်
sis မှာ အရည်အချင်းတွေရှိပါတယ် သေချာထပ်လေ့လာပါဦး အတွေ့အကြုံပြောပြမယ်
ကိုယ်လဲ Unicity မှာလုပ်ခဲ့ဖူးတယ် သူငယ်ချင်းတွေ အသိတွေ မျိုးစုံဆွယ်ခဲံတုန်းက အကုန်ငြင်းထားခဲ့ပြီး အခု
ထိုင်းနိုင်ငံက ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအကြီးကြီးပိုင်တဲ့ သူဠေး တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်ရင်း သွာူလေ့လာခဲ့တာက ပိုးစဝင်တာပဲ
ဒေါက်တာသူရိန် နဲ့ ကို သူရ တို့ရဲ့ SOPP ပေါ့ အကျဉ်းချုံးပြောမယ်
အဲ့အချိန်က ကျွန်တော် ၂၂ ငယ်လဲငယ် တက်လဲတက်ကြွတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ သူတို့ကိုအားကျတယ် အဲ့မှာစတယ် ( E and S အလုပ် ငါးခုလောက်လုပ်ထားဖူးပါတယ်)နောက် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ရန်ကုန် SOPP သုံးခါလောက်လေ့လာပြီးမှစလုပ်တာ မလုပ်ခင် အင်တာနက်ကနေ Multilevel marketing why should and why shouldn't တွေ future wave က ဆရာဖူးကျော်ဇင်တို့ Future Myanmar က ဆရာဇင်ဖြိုးပိုင်တို့အကုန်လုံးနဲ့ကောင်ူကွက်ဆိုကွက်ပြောပြီးမှ စခဲ့တာ
VIP ပဲပေါ့ လုပ်ပြီဆိုလဲထိထိရောက်ရောက်ပဲကောင်းတယ်မလား
ပထမလမှာ ကျွန်တော် တစ်သိန်းခွဲဖိုးလောက်သုံးတယ် ကျန်တာ ရောင်းတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်က သူမျာူနဲ့မတူဘူး STP စာအုပ်နဲ့မဟုတ်ဘူး Tablet နဲ့ ကိုယ်တိုင် Power point လုပ်ပြီး ပြခဲ့တာ
လူတွေကလောဘကြီးတယ်ဗျ ကျွန်တော်က ဆေးအကြောငးအရမ်းူမပြောဘူး Product တွေအဆင်ပြေတာ အသုံးဝင်မ့် Product အချို့ နဲ့ American brand ဘာညာလောက်ပဲပြောပြီး သေချာနာူလည်အောင်ပြောပြပြီးလုပ်နိုင်မှလုပ်ဖို့ ပြောတဲ့ကြားက ကြားချင်တာပဲကြားပြီး လိုက်လုပ်ကြတယ်ဗျ ပထမလတော့ ကိုယ့်အောက်မှာ VIP တစ်ယောက် စ ဝင်တယ်
VIP cashback 40000 and VIP တစ်ယောက် က ပြန်ရတာရယ် နှစ်သိန်းလောက်စဝင်တော့ ရူးတာပေါ့
Trip လဲနီးပြီဆိုတော့ နောက်လ အသံအသန်ကြိုးစားတာ မနက် ၇ ဆို အပြင်ရောက်နေပြီ ည ၁၁ လောက်မှအိမ်ပြန်ဝင်တယ်
KPI ဆိုတာလေးရှိတယ် အဲ့ဒါအကုန်လုံးလုပ်ပြီးမှတစ်ရက်နားတယ်
ဒုတိယလမှာ ကျွန်တော့် Structure လူ ၂၀ နီးပါးဖြစ်လာတယ် ၁၀၀ တွေ ၅၀၀ သုံးယောက်လောက်နဲ့ တိုလီမိုလီတွေအများကြီး Point တွေကစား မှတ်ထား
ရှစ်သိန်းကျော်လောက်ဝင်တယ်ဗျ အဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ ဘန်ကောက်က UPS ကိုသွားတက်ခဲ့တယ် ပြန်လာတော့ ပိုတက်ကြွတာပေါ့ဗျာ ဟိုမှာနိုင်ငံပေါင်းစုံလေ
ပိုလုပ်ရင်းလုပ်ရင်း ကျွန်တော့် downline တွေ မလိုက်နိုင်တော့ဘူး
ဒီနေရာမှာပြောချင်တာ လူတိုင်ူးက လိုချင်တာပဲရှိတယ် အပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူး အကုန်မခံနိုင်ဘူး သံသယများတယ် အသစ်တွေရတယ် အဟောင်းတွေ ပြုတ်သွားတယ် (KPI အတိုင်း Home meeting OPP တွေ ကိုယ့် Projector နဲ့ကိုယ် လိုက်လုပ်ပေးတာတောင်နော် ) ဒါနဲ့ upline ကိုပြောတယ်
သူတို့ပြောလေ့ရှိတာက ဆက်လုပ် UPS သွား Eagle သွား ဒါပဲလာမှာ
သွေးပူတုန်းတော့မသိဘူး အေးဆေးပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါ Weight နဲ့ဖိသွားတာပါပဲ များသောအားဖြင့်က Brainwash လုပ်ခံထားရတဲ့သူများတယ် အပြင်ကလူတွေက ဒါကိုမသိတာ သနားစရာလိုလို MLM မလုပ်တဲ့လူတွေက ပညာမတတ်သလိုလို တစ်ကမာလုံး MLM လုပ်လာမှာမျိုးတွေပြောတယ်
လူတွေက တူရာစုရင်ပျော်တယ် decoration ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ နေရာရောက်ရင် Proud ဖြစ်တယ် နိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေလဲလာတယ်ဆိုတော့ ပြန်ယုံကြည်လာတယ်ပေါ့
ကိုယ်လဲခေါင်းမာခဲ့တယ် အကုန်လုးူံနဲ့ ယှဉ်ပြောတယ် ဒီလို Online မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့
အဲ့တော့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ကိုယ်ကမှန်တယ်ထင်တာကိုး
မှားလားဆိုတော့မမှားဘူး Unicity က Product တွေကောင်းတယ် တခြားဟာတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဒါပေမယ့် ဒီ ဈေးမရှိသင့်ဘူး
FDA Approve ကလဲ Dietry supplement မနေနဲ့တင်တားပြီး လက်တလုံးခြားလုပ်ထားတယ် ဆေးဘူးတ်ုင်းမှာ ကာကွယ်ရန် ကုသရန် မဟုတ်ပါဆိုတဲ့ ခေါင်းရှောင်ထားတာတွေအများကီးတွေ့ရလိမ့်မယ်
Upline ကိုမေးမယ် မမေးဘူး အရင်ဆုံးဖြတ်ပါ
တစ်ချို့ Upline တွေ Downline လောက်အရည်အချင်းမရှိတာ ပညာမတတ်တာတွေအများကြီး မေးလဲ သင်ပေးထားတာတွေပဲထွက်လာမှာ
အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လေးလမှာ ဘာ System မှမပျက်ဘူး Bangkok နှစ်ခေါက် Chingmai Eagle camp တစ်ျခါက်ရောက်ခဲ့တယ် Downline တွေလဲ အသစ်အဟောင်းတွေအများကြီးကို analysis
ပြန်ချကြည့်တော့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူများတယ် စိတ်ညစ်ရတဲ့သူများတယ်
သူတို့မလေ့လာလို့ဆိုတာမျိုးထက် သေချာရှင်းပြခဲ့တာတောင် မအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ပစ္စည်းတွေပြန်ထုတ်ပေးတယ် ကိုယ်လဲ ဆက်မလုပ်ပဲရပ်ခဲ့တယ်
လူတိုင်းက sis လိုမတော်နိုင်ဘူး MLM မှာလဲ လူတိုင်းမအောင်မြင်ဘူး
လူနှစ်မျိုးရှိတယ် တော်တဲ့သူ ညံ့တဲ့သူ အလွယ်ပြောတာပေါ့
ညံ့တဲ့သူတွေရှုံးသွားတယ် တော်တဲ့သူတွေ အောင်မြင်တယ် ( Actually I dont wanna use "success" here. Its really not worthy. ) သူတို့က စကားတွေပြန်သင်ပေးတယ် ဟာကွက်တွေလိုက်ဖာတယ် စဉ်းစားကြည့်ရင် မှန်သလိုနဲ့ အပြင်က ထွက်စဉ်းစားလေလေ Brainwash တွေဖြစ်လေလေ သိလာပါလိမ့်မယ် ငွေက စိတ်ချမ်းသာမှု ဂုဏ်သိက္ခာ သူတစ်ပါးမျက်ရည် ထက်အရေးပေးတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့ အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
အဲ့တော့ ဒီမှာတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါ Multilevel marketing စနစ်ကိုက အောက်ပိုင်းရောက်လေလေ ဆုံးရှုံးမှုများလေလေဖြစ်လို့ ကိုယ်က အဲ့လောက်ရက်စက်ပြီလား
ထိရောက်တာပဲရောင်းတယ် ဘယ်သူမှမထိခိုက်သေးဘူးဆိုလဲ ကိုယ်ပြောတာယုံပါ တွေ့လာပါလိမ့်မယ် ကိုယ့်ကို အကောင်ူးပြောတဲ့ပါးစပ်တွေလဲ ပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်
Eagle camp ဆိုတာမှာ အဓိကက ထိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့ Teamwork building game တွေနဲ့ MLM lobby ရိုက်ထည့်တာတွေသင်ပါတယ် နောက်ကိုယ်မဖြစ်လာမယ့်ဟာမျိုးတွေ
ကိုယ့်မိဘသေသွားတာ ကိုယ်သေသွားတာလို ဟာမျိုးပေါ့ Psychology်သဘော Hurt ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ် အဲ့ကနေ Force ပြန်ယူတယ် ( Sorry for spoiling here ) အတိအကျမပြောဘူး ကတိထာူးခဲ့တဲ့အတွက် ဒီလောက်ပဲပြောပြပါမယ် Hurt ဖြစ်သွားတော့ ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်မိသားစုကလွဲရင် ကျန်တာမသိတော့ဘူး လုပ်မယ် ကိုင်မယ်ဖြစ်လာတာ နောက်ဆုံး ကိုယ်တုံးလုံးဆိုတာလဲမှန်ပါတယ် အကုန်ချွတ်ခိုင်းတာမျိုးတောမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကြိုက်တာတွေကိုယ်ချွတ်ပြီးအရှည်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆက်ရတာပါ
Eagle camp သွားရင် စားရိတ် ၆သိန်းလောက်ကုန်ပါလိမ့်မယ် တခြာူး courseျတွကပိုထိရောက်ပါတယ်
အကြံပေးတာပါ ကိုယ့်တုန်းကျခါင်းမာပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန် Share ပေးပါတယ်
Robert တို့ TRUMP တို့က MLM ကို recommend ပေးထားတာလဲအထင်မကြီးပါနဲ့ သူတို့ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် ကစားထားတဲ့ Trick ပါ
ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ပိုက်ဆံရပေမယ့် ပြန်ကုန်တာတွေ သူငယ်ချင်ူအချို့ဖယ်သွားတာတွေ တကယ်လုပ်ငန်းလုပ်မယ့်အချိန်မှာ အထင်သေးခံရတာတွေ Downline တွေရဲ့ နောင်တတွေသောကတွေ နဲ့မတန်ပါဘူး Downline တွေသနားဖို့ကောင်ူတယ် ဒီလူတွေဒီလိုပြောတယ် ဟိုလိုပြောတယ် အာူးကိုးတကြီးတိုင်ပင်ကြတဲ့သောကတွေ ငွေပြန်မရသေးဘူး လူခေါ်လို့အဆင်မပြေဘူး ပြောကြတာတွေ ပြန်စဉ်းစားမိရင်စိတ်မကောင်းဘူး
Words of experience ပါ sis ခုလို ဆေးလေးရောင်ူနေတာလောက်က ကိုယ်လဲမလိမ်ဘူး ကိုယ်လဲ အလိမ်မခံရဘူးဆိုပြီးဆက်လုပ်ချင်လဲ ဖြစ်လာမယ့် ဒဏ်တွေခံနိုင်အောင်လုပ်ပါ
ကိုယ့်တုန်းကတော့ ဝိုင်းတားတဲ့သူတွေကို ချဉ်လို့ ခေါင်ူမာခဲ့တာပဲ :D
ကိုယ် မြန်မာလိုရိုက်ရတာ အဆင်မပြေတဲ့ကြားက စေတနာနဲ့ ပြည့်စုံအောင် ပြောပြပေးထားပါတယ် စားလုံးပေါင်းသည်းခံပြီးသေချာဖတ်ပါ
ကိုယ်ကတော့ လူငယ်တွေအတွက် Passion'' energy and time တွေ ဒီ ငါးပွက်လေးမှာမကုန်စေချင်ဘူး
အပြင်မှာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Business management , sale & marketing. Finance . accounting . Human resource အမျာူကြီးအများကြီးရှိပါတယ် အဲ့ဒါတွေလေ့လာပါ
အတွေးတစ်ခုရရင် ဒီစာတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက် အထမြောက်ပါပြီ